Voalaza fa fitaovana hanamboarana ny kianjaben’i Mahamasina ireo. Nisy moa ny loharanom-baovao nilaza fa voatery namonoana omby mihitsy teny an-toerana satria nikatso ny asa. Voalazan’io loharanom-baovao io fa noresena lahatra ireo sinoa manao ny asa mba hamonoana omby eo amin’io toerana io, ka natao tokoa ny talata lasa teo, izany hoe tamin’ny heriny anio. Voalaza fa nisosa mora ny asa rehetra taorian’io. Manana telo volana eo ny fanjakana hanatanterahana ny fanambiny, dia ny hahavitan’ny dingana voalohan’ny asa mialoha ny 26 jona 2020. Tsy misy ahiana ny resaka coronavirus momba ilay sambo sinoa satria dia efa mihoatra ny 40 andro no nitoka-monina io sambo io, ary 6 volana tsy tany Sina, raha ny fanazavana. Voalaza fa tsy avy any Sina ireo entana ampidinina eto ireo fa nalaina rany an-toeran-kafa. Tsy nisy ihany koa mpiasa sinoa nampidinina teny ambony sambo hiasa eto Madagasikara tamin'io sambo vao tonga io. Raha ny loharanom-baovao hatrany dia tena hentitra ny fepetra momba ny coronavirus raha ao amin'ny seranan-tsambo Toamasina. Hatramin'ilay sambo lehibe mpitondra mpizahatany Costa aza dia niverim-potsiny, na dia efa feno bajaj 200 mahery niandry teo ivelany hitsena vahiny, ary nody fotsiny ireo mpivarotra art Malagasy.